Relationship | M Media Zone
August 2, 2019 mmediazone 0
စိတ်​​ပျော်​ချင်​ရင်​ ..ယောကျာ်းယူပါ …!! အလုပ်မှာမကျေနပ်သမျှ သူ့ကိုမဲလို့ရပါတယ်…။ ပျော်ရွှင်လာတာရှိရင် သူ့အပေါ်အားရပါးရခုန်တက်လို့ရပါတယ်…။ နေမကောင်းခဲ့ရင် အသားကုန်ချွဲ ရေသာခိုလို့ရပါတယ်…။ ထမင်းစားပြီး ပန်းကန်ဆေးဖို့ပျင်းရင် ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်…။ ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ Mini mart မှာ တူတူအသင့်စားလို့ ရတာတွေ ထွက်ဝယ်လို့ရပါတယ်…။ လကုန်လို့ကိုယ့်လခမလောက်ရင် သူ့လခကို ရုပ်တည်နဲ့ ကိုယ့်ဟာလုပ်ပစ်လို့ရပါတယ်…။ ကိုရီးယားကားကြည့်ရင်း […]
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ဆန်းကျယ် သလောက် နက်ရှိုင်းမှု ရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံ ပကာသနတွေ အပေါ် စွဲလမ်းပြီး ချစ်တာတွေ၊ ရုပ်ရည်ရူပကာကို ကြည့်ပြီး ချစ်တာတွေ စတဲ့ အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး ချစ်ကြိုက်သူတွေ များစွာရှိတဲ့ အထဲမှာ တကယ့်မေတ္တာစစ်၊ မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်ကြိုက်တဲ့ ချစ်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံပကာသနတွေအပေါ် စွဲလမ်းပြီး […]
ချစ်သူကောင်မလေးကို Surprise လုပ်ဖို့ သွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ ရင်ကွဲသွားရတဲ့ ချစ်သူကောင်လေး
ခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ ခိုင်မြဲတဲ့ Relationship တစ်ခုရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲလှပါတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ အပြစ်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အိမ်ထောင်ရေးကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ နားလည်သေးတဲ့ အရွယ်မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ပြတ်နောက်တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် အခုကတော့ တစ်ယောက်နဲ့က မပြတ်သေးဘူး နောက်ထပ် နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကို မနိုင်ဝန်ထမ်းနေကြတဲ့သူတွေက တစ်ပုံကြီးတွေ့နေရမှာပါ။ ယခုပုံမှာဆိုရင်လည်း ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးမွေးနေ့ကို […]
ယောင်္ကျားလေးတွေ သဝန်တိုလာရင် မိန်းကလေးတွေလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်မပြောပြတတ်တာကြောင့် ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို မိန်းကလေးဘက်က နားမလည်ရင်တော့ ပြဿနာဟာ တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူကောင်လေး ဒီအရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို သဝန်တိုနေတယ်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။ ၁။ စပြီး ဂရုမစိုက်တော့ဘူး… စကားပြောနေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် […]
အရပ်ရှည်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အရပ်ပုပု အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အချစ်ရေးက ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ အရပ်ပုသူအမျိုးသမီးနဲ့ အရပ်ရှည်သူအမျိုးသားတို့ဟာ အပြန်အလှန် လိုက်ဖက်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့တစ်တွေရဲ့ အချစ်ရေးဟာ တစ်ခြားစုံတွဲတွေထက် ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ ဒီသုတေသနစစ်တမ်းကို (၂၀၁၅)ခုနှစ်တုန်းက ဆိုးလ်မြို့၊ Konkuk University တက္ကသိုလ်မှာ ဒေါက်တာ Kitae Sohn နဲ့အဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ […]
ချစ်သူသက်တမ်း ၄နှစ်မှာ သိန်း၃၀ စုမိခဲ့သော ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ဘဏ်စာအုပ်လေး
ရည်းစားဖြစ်ပြီး ၂နှစ်လောက်မှာ နှစ်ယောက်သား ပိုက်ဆံစုရအောင်လို့ စပြီးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့စုမယ်ဆိုပြီး ငွေစစုဖြစ်သွားတာပေ့ါ တစ်လတစ်ခါ ဘဏ်ထဲငွေထည့်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ လခစား ဝန်ထမ်းဆိုတော့ အများကြီးမစုနိုင်ဘူး။ (၃ပုံ၁ပုံလောက်ပေ့ါ) တစ်လ နှစ်ယောက်ပေါင်း ၁သိန်း စုကြမယ်ဆိုပြီး ဘဏ်စာအုပ်လေးလုပ်လိုက်ကြတယ်။ Bank account ကိုလဲ ၂ယောက်နာမည်နဲ့ KBZ_Call_Deposits_account […]
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူစိမ်းဖြစ်သွားဖူးတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်များ
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အရေးပါလွန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ မရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝကြီးမှာ ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံနိုင်သလို၊ အဆင်မပြေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ကိုယ့်ကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်သူပေါ့။ ဒါပေမယ့် လောကကြီးရဲ့ ဓမ္မတာအရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခဲ့ခင်ခဲ့ပါစေ သူစိမ်းဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူစိမ်းဖြစ်သွားဖူးတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်တွေကို […]
ချစ်သူဆင်းရဲသားနဲ့ ပေါင်းသင်းဖို့ ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှ စွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
မလေးရှားနိုင်ငံက ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး Khoo Kay Peng ရဲ့ သမီးအရင်းဖြစ်သူ Angeline Francis Khoo ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူကို လက်ထပ်ဖို့အတွက် ဖခင်ဆီက ရနိုင်တဲ့ ခံစားခွင့်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဌေးကြီး Peng ဟာ ပေါင်သန်း 400 ချမ်းသာသူ ဖြစ်ပြီး၊ […]
အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို မိဘတွေက သဘောမတူလို့ ခွဲကြတာတဲ့ ….(Video)
အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကို မိဘတွေက သဘောမတူလို့ ခွဲကြတာတဲ့ဗျာ ….. တကယ်ချစ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေမှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာ သူတို့ချင်း ဖြူဖြူစင်စင် ချစ်ခင်ကြတာဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလေ …။ လူကြီးမိဘတွေပေးစားတဲ့ အိမ်ထောင်းရေးတိုင်း အဆင်ပြေတာမှမဟုတ်တာ …။ လူကြီးတွေသဘောတူတဲ့သူပဲ ယူတဲ့သူအများစုဟာ အဆင်မပြေတာကပိုများတယ်မဟုတ်လား …? အချစ်ဆိုတာ အလွယ်တစ်ကူ လုပ်ယူလို့အတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ […]
ချစ်သူမိန်းကလေးကို “အရူးမ” လုို့ ချစ်စနုိုးနဲ့ ခေါ်မိတဲ့အတွက် ထောင် ၂ လကျသွားတဲ့ အမျိုးသား
ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားမှာ စနောက် ခေါ်ဆိုတာတွေ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေ က မဆန်းပေမယ့် ယူအေအီးနိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ သူ့ချစ်သူမိန်း ကလေးကို အရူးမလို့ ခေါ်ဆိုမိခဲ့တာ ကြောင့် ထောင်ဒဏ် ရက် ၆၀ ချမှတ်ခံရ ပြီး ဒဏ်ငွေ ဒါရမ် ၂၀၀၀၀ (ကန်ဒေါ် လာ ၅၄၄၆ ခန့်) […]
စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ အကြီးဆုံးသားသမီးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ခံယူချက်
မောင်နှမသားချင်းတွေထဲမှာ အကြီးဆုံးသားသမီးတွေဟာ မိသားစုကို ခင်တွယ်သလို၊ အနစ်နာလည်း အရမ်းခံတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ အမကြီး အမိရာ၊ အကိုကြီး အဖရာဆိုသလိုပဲ တာဝန်ကျေဖို့အစွမ်းကုန် ကြိုးစားချင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အကြီးဆုံးသားသမီးတွေရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အကြီးဆုံးသားသမီးတိုင်းတော့ ဒီလိုစိတ်ထားမရှိပါဘူး၊ စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူမှပါနော်.. (၁) မိဘကို သိတတ်တယ်… သူတို့တွေဟာ […]
ယောက်ျား(၁၂)ယောက်လုံးကို တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး
မင်္ဂလာခန်းဝင် ပစ္စည်း တွေကြောင့် ယောက်ျား(၁၂)ယောက် ကို လက်ထပ် ခဲ့ပေမယ့် သူတို့အပေါ်ပေးခဲ့တဲ့ သူမ အချစ်ကတော့ စစ် ပါတယ်လို့ အသက် (၃၂)နှစ် Jariyaporn Buayai ကဆိုပါတယ်။ Buayai ကို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက်ထပ် မှုကြောင့် သူမ ကို ဘန်ကောက် […]
ဒီလောက်အထိချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရင် တန်ဖိုးထားပါ
မိန်းကလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် ပွေရှုပ်ချင်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သေတပန်သက်တစ်ဆုံး လက်တွဲသွားချင်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ချစ်သလောက် ကိုယ်ပြန်အချစ်မခံရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ် တန်ဖိုးမထားတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို နားမလည်ပေးတဲ့ အခါတွေမှာတော့ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ရင်ခွင်မှာခိုလှုံဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်အတွက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့မိန်းကလေးကို […]
ချစ်သူအပေါ် ထာဝရ သစ္စာ ရှိသွားမယ့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၅) မျိုး
သစ္စာဆိုတာ အပြုအမူ၊ လုပ်ဆောင်ချက် တွေမှာ ထင်ဟပ်နေတဲ့ အရာမျိုးပါ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ယောက်ျားလေး တယောက်ကို တကယ် ချစ်ပြီ ဆိုရင် သစ္စာဆိုတာ အလိုလို ပါလာပြီးသားပါ။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူကောင်မေ လး ဟာ ခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သစ္စာအရမ်း […]
ကိုယ့်ဖက်ကချည်း ချစ်နေရလို့ ပင်ပန်းလွန်းနေပြီဆိုရင် အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်သွားမယ့် အဆင့် (8) ခု…
တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဆိုတာ တကယ်ကိုနာကျင်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဖက်က စချစ်ရတာ ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့်ကိုယ်ချစ်သလို သူကလုံးဝပြန်မချစ်လာတဲ့အခါ၊ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်မှာမဟုတ်မှန်း သေချာနေတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်ဖို့သာ ရွေးချယ်ရတော့မှာပါနော်။ ကိုယ့်ဖက်ကချည်း ချစ်နေရလို့ ပင်ပန်းလွန်းနေပြီဆိုရင် အပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေက သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ (၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို အတင်းလုပ်ယူလို့မှမရပဲ။ သင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို၊ […]
ချစ်တဲ့သူကို သတိရတဲ့အခါ မေတ္တာပို့ပေးပါ …..